Kulanka Baarlamaanka ee maalinta berri oo isha lagu hayo, kaas oo looga hadli doono arrimaha Qalbi-Dhagax |
Muqdisho (estvlive) 08/09/2017
Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka oo shalay kulan ku yeeshay magaalladda Muqdisho, ayaa sheegay in kulanka Baarlamaanka ee maalinta berri ah ee taariikhda ay ku beegantahay 9/9/2017 looga hadli doono arrimo ay kamid yihiin go’aankii xukuumadda ay ka qaadatay arrinta Qalbi-Dhagax.
Xoghayaha Guud ee Golaha shacabka C/kariin Xaaji Cabdi (Buux), ayaa warbaahinta u cadeeyay in ajandaha ugu muhiimsan ee kulanka uu yahay go’aankii ka soo baxay Xukuumadda oo ku saabsanaa arrinta Sarkaalka ONLF.
Xildhibaannada Baarlamaanka, ayaa ku kala qeybsan arrinta Qalbi-Dhagax, waxaana kulanka baarlamaanka la filayaa in uu noqdo mid xiiso baddan, sida siyaasiyiinta ay sheegayaan.
Xildhibaannadda go’aanka xukuumadda, ku kala aragti ah ayaa kulamo is-arag ah, waxaa ay ku yeelanayeen magaalladda Muqdisho tan iyo markii uu soo baxay go’aanka. Abaabul ballaaran ayaa ka socda magaalladda, waxaana loo arkaa in aan hal meel loo wada socon.
Kulankan maalinta berri ah ayaa waxaa uu yahay kii 11-aad ee Baarlamaanka.